पार्टी फेरेर वा फोरेर जुटेका यादव, भट्टराई र राईको संयुक्त भान्सा « Nepal Bahas
राजनीतिका धुन्धुकारीहरूबाट पार्टी बन्दैन, चितुवालाई बाख्राको गोठालो राखेजस्तै !
प्रकाशित मिति : ३० बैशाख २०७६, सोमबार २२:११
हालै ‘समाजवादी पार्टी नेपाल’ को अवतारमा देखापरेको नयाँ समीकरणमा मधेशी फोरमका सर्वेसर्वा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, माओवादीका सिद्धान्तकार, नीतिकार तथा १० वर्षे हिंसा र रक्तपातका रणनीतिकार माओवादीमा उपाध्यक्ष भइसकेर ‘नयाँ शक्ति’ नामक पार्टी बनाएका र त्यो पनि विघटन गरेर हिंडेका डा. बाबुराम भट्टराई र एमालेको उपाध्यक्षसम्म भएर एमाले छोडेका, संघीय समाजवादी पार्टी बनाएका तर चलाउन नसकेर उपेन्द्र यादवभित्र बिलय भएका अशोक राई तीन मूख्य चरित्र देखिएका छन् । पार्टी फेर्नु वा फोर्नु यिनीहरूको विशेषता हो ।
अर्थात पार्टीको नाम समाजवादी, कामचाहिँ जातिवादी र अधिनायकवादी । ११ प्रदेशको मागले जातिवादी भन्ने देखाउँछ, कार्यकारी राष्ट्रपतिको मागले अधिनायकवादी हुने नियत देखाउँछ । यस्तो चालामालाले कुनैपनि पार्टी समाजवादी हुनै सक्दैन तर उसैले समाजवादको खिताब ओडेको छ– जुन गोरुको सिङ छैन उसैको नाम तीखे भनेझैं ।
यसअघिसम्म एमालेबाट निस्केर उपेन्द्र यादवको मधेशी फोरमसँग घाँटी जोडेका संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वएमाले उपाध्यक्ष अशोक राईले एक दिन प्रेस अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘यति कुरा लेखेर राख्नुहोस्, म एमालेमा रहिन र बाहिर बस्ने अवस्था आयो भनेपनि माओवादीमा चाहिँ कुनै हालतमा जान्न’ (कान्तिपुरमा अन्तर्वार्ता ०६९ जेठ २४ आइतबार) ।
गएको चुनावले धेरै हस्तीहरू को कति पानीमा छ भन्ने देखाइदियो । धेरै ‘गोरेबहादुर र सीपी मैनाली प्रवृत्ति’लाई जन्मायो तर जातिवादी विचारलाई बढा¥यो । एकल जातीय पहिचानसहितको राज्यसंरचना गर्न ताउरमाउर गरेकाहरूलाई ठेगान लगायो । ‘पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान’ भनी नारा दिएर जातीय राज्यको मागलाई हम्किने एमाओवादी ठूलो शक्तिमा विलय भयो । जनादेशको यो ढुकढुकी बुझेर नै प्रचण्डले आफ्नो पार्टी एमालेमा विलय गराइदिए ।
अर्कातिर यादव, भट्टराई र राईको यो नयाँ समाजवादी पार्टीले जातीय पहिचानसहितको ११ प्रदेशको राज्यसंरचना र कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्थाका लागि काम गर्ने घोषणा गरेका छन् । अर्थात पार्टीको नाम समाजवादी, कामचाहिँ जातिवादी र अधिनायकवादी । ११ प्रदेशको मागले जातिवादी भन्ने देखाउँछ, कार्यकारी राष्ट्रपतिको मागले अधिनायकवादी हुने नियत देखाउँछ । यस्तो चालामालाले कुनैपनि पार्टी समाजवादी हुनै सक्दैन तर उसैले समाजवादको खिताब ओडेको छ– जुन गोरुको सिङ छैन उसैको नाम तीखे भनेझैं ।
पार्टी फुटाउनमा माहिर मधेशी दलहरू हुन् । संविधानसभामा ५४ सभासद बोकेको उपेन्द्र यादवको सग्लो फोरम फुटेर तीन टुक्रा भयो, बिजय गच्छदारले नेतृत्व गरेको ‘लोकतान्त्रिक फोरम’ र जयप्रकाश गुप्ता र पछि राजकिशोर यादवले नेतृत्व गरेको ‘संघीय फोरम’ फोरिएर गए । गच्छदारको फोरम कांग्रेसमा बिलय भयो । गजेन्द्रनारायण सिंहले स्थापना र नेतृत्व दिएको सद्भावना पार्टी उनकै अनुयायीहरूले पोलेर खाइसकेपछि त्यसको आज नामोनिशान छैन । अठार वर्षको दौरानमा सातपटक र एक महिनामै तीन टुक्रामा चोइटियो । २०४९ सालमा पहिलोपटक रामजनम तिवारीको नेतृत्वमा फुट्यो भने दोस्रोपटक २०५२ मा हृदयेश त्रिपाठी तथा रामेश्वरराय यादवको नेतृत्वमा । त्यसैगरी २०५९ मा गजेन्द्रकै पत्नी आनन्दीदेवीको नेतृत्वमा, ०६४ मा राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा । सबभन्दा धेरै २०६५ सालमा— कार्तिक ३ गते सरिता गिरी, पाँच गते श्यामसुन्दर गुुप्ता (अपहरणको अपराधमा जेल बसेर गत साल छुटेका) र कार्तिक २९ गते खुशीलाल मण्डलको नेतृत्वमा । छ वटा मधेशी पार्टी फुटेर १८ टुक्रा भए । आज त्यो पार्टीको बचुखुचेका मल्वा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको अवतार लिएको छ ।
२०६४ को मधेश आन्दोलनले नै हो, तराई–मधेसमा १०९ वटा सशस्त्र समुहलाई सक्रिय हुने सम्भावना बनाइदियो । त्यसले गर्दा बिहारमा मूख्यमन्त्री नितिश कुमारले दोहोलो काढेका पेशेवर अपराधी मधेश आन्दोलनको अवतार लिएर नेपालभित्र पसेका हुन् । ‘एक मधेश एक प्रदेश’ को असम्भव नारा लगाएर पञ्चतन्त्रको शोम शर्माको सातु व्यापारजस्तै उडन्ते कल्पनामा राजनीति चलाएका उपेन्द्र यादव ‘मधेश बर्वाद आन्दोलन’का एक हस्ती भइदिए । घाटघाटको पानी पिउँदै मधेशी जनअधिकार फोरम नामको एउटा एनजीओ खोलेर त्यसैलाई पार्टी बनाएका उपेन्द्र यादव अब त्यसबाट पनि मधेशमा गुजारा नचल्ने बुझेपछि उनी त्यस्तै अस्थिरतावादी, संगठनको ढङ्ग र सबैलाई समेट्ने फराकिलो छाती नभएका बाबुरामसँग मिल्न पुगेका हुन् । तर प्रष्ट भए हुन्छ, यादव, भट्टराई र राई पार्टी संगठन गर्ने चरित्रका होइनन् । यिनीहरूबाट पार्टी बन्दैन, पार्टी बनाएर चलाउने संस्कार नै छैन, बनेको पार्टी चाहिँ फोरिन्छ । नेपाली राजनीतिका धुन्धुकारी नै हुन् यी ।
१६ वर्षको उमेरमा मनमोहन अधिकारीको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी) का मोरङ सदस्यबाट राजनीतिक यात्रा थालेका यादवले नेपाली राजनीतका धेरैवटा घाटको पानी पिइसकेका छन्, माक्र्सवादी, एमाले, माले, माओवादीनिकट मधेशी मुक्ति मोर्चा, मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल इत्यादि । २०५४ सालबाट चाहिँ यिनी कम्युनिष्ट राजनीतिबाट अलग भए, बिहारी राजनीतिको एउटा हिस्सा ‘नेपाल भारत सीमा संरक्षण मञ्च’को नेपाली सहभागीका रुपमा आफ्नो फोरमलाई खडा गरेर । यसप्रकार ‘जोड र तोड’को पार्टी राजनीतिका कारणले मधेशी दलहरू निकै बदनाम भएका छन् ।
एकल जातीय पहिचानका नाममा जंगबहादुरकालीन बि.सं. १९१० को ‘मुलुकी ऐन’ बिर्साउने वा ब्युँताउने परिपाटीलाई जनताले निर्ममतापूर्वक तह लगाइदिएको तत्वज्ञानलाई प्रकारान्तरमा बुझेका प्रचण्ड एमाओवादीलाई संसदीय व्यवस्था अनुकूल र सामथ्र्यका आधारमा राज्यको संरचना बनाउने अवस्थामा ल्याउने क्रममा अब यो पार्टी चलाउन सकिन्न भनेर एमालेमा मिलाएका हुन् । प्रचण्डको राजनीतिक पराजय हो त्यो । आज उनी जतिसुकै उफ्रिउन्, त्यो हारेको जर्नेलको नसुहाउँदो फुर्तीमात्र हो ।
संघीयताका नाममा जातीय संघीयताबाट नेपाली जनतामात्र होइन, छिमेकी चीन पनि चनाखो र संवेदनशील भएको कुरालाई अतिवादी र जातिवादीहरूले नबुझेका थिएनन्, तर युरोपेली र अमेरिकाको ग्रीन डलरको घाँस पाए नेपाली गाँस कसले हेर्ने ? एकल जातीय पहिचानका आधारमा राज्य बाँडफाँड गर्ने कुरामा पकेट खर्च दिएर उक्साई तिब्बतमा उपद्रव मच्चाएर चीनलाई हैरान गर्ने शीतयुद्धका लागि पश्चिमाहरूले राजनीतिक लाहुरे भर्ना गर्न थालेको रहस्य यी हारेका जुवाडेजस्ता नेताहरूले पत्तै पाएनछन् भन्नु हास्याँस्पद होला । कम्युनिष्ट बिग्रिएपछि कम्युनलिस्ट (सम्प्रदायवादी) हुन्छ भन्ने यथार्थ जनजातिका स्वजाति भक्षकहरूबाट प्रमाणित भइरहेको छ ।
गत आमनिर्वाचनले तराईबाट सिंहदरबारमा ‘मधेश’ भँजाउँदै आएका ‘राजनीति’ का फोहोरी खेलाडीलाई पनि निर्ममतापूर्वक उनीहरूकै घरआँगनमा थन्क्याइदिएको थियो । तिनीहरू आज अर्को मधेश आन्दोलनका नाममा शिर उठाउने प्रयास गरिरहेका छन् र अहिले मन्त्री पदका लागि ‘सिमाङकन हाम्रो बटमलाईन अथवा ब्याटल क्राई हो’ भनेर फलाकिरहेका छन् । तिनै मधेशीका बीच ‘हंसमध्ये वको यथा’ भएर अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठहरू देखापर्ने गर्छन् । भनौं न देशले ¥यासिस्ट, फाशिस्ट र सेपरेटिस्ट (जातिवादी, फासीवादी र पृथकतावादी) लाई रुचाएको रहेनछ, गएको चुनावले त्यस्तालाई सोत्तर बनाइदिएको हो । तर त्यसबाट शिक्षा लिन नसकेका यी ‘तीन त्रिकट महाविकट’ हरू उही लिँढेढिपीको राजनीतिलाई जोड गरिरहेका छन् ।
संघीयताका नाममा विदेशी चलखेलबारे चिनियाँ चिन्तालाई लिएर नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’ ले २०६९ साउन ११ गते चीनको १० दिने भ्रमण गरेर फर्केपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नै भनेका थिए, “संघीयताका नाममा विदेशी चलखेलको पक्षमा हामी छैनौं भन्नुहोस् । त्यसमा पनि नेपालको जातीय राज्य संरचनाबारे चिनियाँ मित्रहरूलाई आफ्नै सुरक्षाको चिन्ता रहेछ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल भएर राष्ट्रिय पहिचान संकटमा पर्ला कि भन्नेमा हामीलाई चिन्ता छ’ भन्ने चिनियाँ नेताहरूको दृष्टिकोण पाएँ ।” बुझ्दै ल्याउँदा भारतको पनि यस्तै विचार छ । किन कि जातीय राज्यहरू यहाँका जनजातिको होइन पश्चिमाहरूको माग र मागका लागि लगानी भएको हो । यसका लागि कतिपय एनजीओहरू कम्मर कसेर लागिपरेकै छन् ।
अशोक राईलगायत बैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य विजय सुब्बा, केन्द्रीय सदस्यहरू राजेन्द्र श्रेष्ठ, रकम चेमजोङ, बीरबहादुर लामा तथा वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य अजम्बर काङ्माङ् (राई), पूर्व संविधानसभा सदस्यहरू रिजवान अन्सारी (गृहराज्यमन्त्री), गोपाल ठाकुर, प्रा.डा. मंगलसिद्धि मानन्धर, हेमराज राई, रणध्वज कन्दङ्वा, राजकुमार राई आदिले ०६९ साल असोज १८ गते बिहिबारको साइत मिलाएर बल्खु कार्यालयलाई खोला किनारको रित्तो भुतबंलगा बनाइदिने जस्तो दम्भका साथ मरेको गोरुलाई जुम्राले छोडे झैं तत्कालीन एमालेलाई छोडेर हिँडेका हुन् । यीमध्ये विजय सुब्बाचाहिँ अहिले फर्केर नेकपामै थन्किएका छन् । यी भन्दा पनि एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य रहिसकेका रामचन्द्र झा र उर्मिला अर्यालजस्ता हस्तीहरू वा उर्मिला साह आदि एमाओवादीमा जानु चोक्टा खान गएका थिए झोलमै डुबेर मर्नु परेसरहको रुनु न हाँस्नुको नियति भोग्न पनि पुगे । यिनीहरू पार्टी छोडेर हिँडेकै दिन अध्यक्ष झलनाथ खनालले भनेका थिए, “……एमाले अहिलेसम्म ४० समुहलाई एकताबद्ध गरेर बनेको पार्टी हो । यसलाई हात्तीसँग तुलना गर्न सकिन्छ । हात्तीको जिऊबाट धूलो खसिरहेको हुन्छ, तर हात्तीलाई केही पनि हुँदैन, ऊ लम्किरहन्छ ।”
भीमबहादुरजी भेलामा जानुभो र प्रमुख अतिथिको रुपमा भाषण गर्नु भो, “म सबभन्दा पहिले त यो भेलाको मक्सद र नियत ठीक छ कि छैन भनेर क्लियर हुन चाहन्छु । यस भेलामा गत बाह«ौं महाधिवेशनमा पार्टीको महासमिति सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुभएका थुप्रा साथीहरूलाई पनि देखिरहेको छु, जुन महाधिवेशनमा म पार्टीको सभापति पदका लागि चुनाव लडिरहेको थिएँ र मैले जम्मा ७२ भोट पाएको थिएँ । आज मेरो आवश्यकता देख्ने तपाईहरू पहिले मेरो प्रश्नको जवाफ दिनुहोस् त्यो महाधिवेशनमा तपाईहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो ? मलाई किन भोट दिनुभएन त्यो बेला ? त्यसैले मैले यो भेलाको नियतबारे प्रश्न उठाएको हूँ ।” उहाँका यी भनाइले भेला आयोजक सबैको उत्साह लल्याकलुलुक भयो । मुखमा बुजो कोचियो ।
एकताका नेपाली कांग्रेसमा पनि त्यही महामारी सल्किएको थियो । इन्द्रबहादुर गुरुङ्, सूर्यमान गुरुङ्, दुर्गामणि देवान, चैतन्य सुब्बा आदिले पनि जनतामा आफ्नो असली रुप र नियत देखाए । एक बिहान राजधानीको खुमजुङ होटलमा कांग्रेसका करिब तीनसय चल्तापूर्जा जनजाति कांग्रेसजनको भेला भएछ र त्यसले स्वर्गीय नेता भीमबहादुर तामाङलाई आफ्नो प्रस्ताबित पार्टीको नेता बनाउने भनी सो भेलाको प्रमुख अतिथिका रुपमा आमन्त्रण गरेछन् । भीमबहादुरजी भेलामा जानुभो र प्रमुख अतिथिको रुपमा भाषण गर्नु भो, “म सबभन्दा पहिले त यो भेलाको मक्सद र नियत ठीक छ कि छैन भनेर क्लियर हुन चाहन्छु । यस भेलामा गत बाह«ौं महाधिवेशनमा पार्टीको महासमिति सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुभएका थुप्रा साथीहरूलाई पनि देखिरहेको छु, जुन महाधिवेशनमा म पार्टीको सभापति पदका लागि चुनाव लडिरहेको थिएँ र मैले जम्मा ७२ भोट पाएको थिएँ । आज मेरो आवश्यकता देख्ने तपाईहरू पहिले मेरो प्रश्नको जवाफ दिनुहोस् त्यो महाधिवेशनमा तपाईहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो ? मलाई किन भोट दिनुभएन त्यो बेला ? त्यसैले मैले यो भेलाको नियतबारे प्रश्न उठाएको हूँ ।” उहाँका यी भनाइले भेला आयोजक सबैको उत्साह लल्याकलुलुक भयो । मुखमा बुजो कोचियो । भीमबहादुरजी आफ्नो भाषण सकेर ‘अर्को कार्यक्रममा पनि पुग्नुछ’ भनी हिँड्नुभयो । भेलाको खेला त्यहीँ खतम ।
तत्कालीन एमालेमा रहँदासम्म अशोक राई स्वच्छ छविका इमानदार नेताका रुपमा सबैले नाम लिने गर्थे । तर खराब मानिसको संगत गर्न थाल्ने हो भने जस्तोसुकै स्वच्छ छविको मानिस पनि दुर्घन्धित हुन बेर लाग्दैन । अशोकजीका इर्दगिर्दका सबै ‘नेता’ स्वच्छ छन् भन्न सकिन्न । उनीहरू जेजस्ता हुन्, आफ्नो पार्टीको अध्यक्षका रुपमा स्वच्छ, शालिन र भद्र स्वभावको अशोकजीलाई उनीहरूले रोजेरै ठहराएका हुन् । बेइमानहरूले इमानदार नाइके खोज्दा अशोकजीलाई पाएको उनले बझ्ुनुपर्ने हो ।
६३ वर्षमा हिँड्दै गरेका अशोककुमार राईले राजनीतिमा धेरै पापड बेलिसकेका छन् । सुशीला श्रेष्ठसँग लगनगाँठो कसेका उनी ससुराली नेवार भएका धेरै एमाले नेतामध्येका एक थिए । धरानको हात्तीसारस्थित ब्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि संस्थानबाट शिक्षादीक्षा पाएका अशोकजीले अँग्रेजी भाषाको विशेष तालिम पनि लिएका छन् । ‘अमर वान्तवा’ उल्लेखित छद्म नाममा प्रकाशित उनको एउटा कविता संग्रह ‘अँध्यारोभित्रका फिलिङ्गाहरू’ प्रकाशित भएकोले उनी कवि हृदयको मानिस हो भन्ने प्रष्टै छ ।
२०४३ सालदेखि एमाले केन्द्रीय कमिटीमा पुगिसकेका उनी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पनि भए । मन्त्री हुँदा उनको सदाचार जीवनशैली र इमानदारीको बारेमा ती मन्त्रालयका कर्मचारीहरू अझै पनि चर्चा गर्छन् । २०३५ सालमा नख्खु जेल फोरेर फरार हुने (पछि पञ्चायती शासनले झापा र इलामको सीमास्थित सुखानीको जंगलमा मारेका) कमरेडहरूबाट प्रेरणा पाएको बताउने अशोकजीका लागि संघीय समाजवादी पार्टी घाँडो भएको हुनुपर्छ, जुन पार्टीका समानुपातिक सभासद हुने संख्या एउटा हातका औँला जतिमात्र थिए ।
विसर्जनवादी राजनीति कसरी ढोल–नगरा बजाउँदै आउँदो रहेछ, जसको अन्तर्वस्तु ढोल–नगराजस्तै भित्र खोक्रो हुने गर्छ भन्ने बुझ्न अशोकजी र उनको पार्टी नै ज्वलन्त उदाहरण हुन् । अशोकजी खोक्रो राजनीतिको बोक्रो भएर गए । इमानदारी भएर मात्र राजनीति सफल नहुँदो रहेछ । अहिलेको समाजवादी पार्टी नेपाल पनि कुन भविष्य भएको हो र ! त्यसैले अहिले जन्मेको समाजवादी पार्टीमा उनको हर्ष न विस्मातको मनोदशा देखिन्छ, अरुको के कुरा ? कतिपयले त यो पार्टी विघटनको उल्टोगिन्ती पनि गर्न थालिसके ।